ESTA အမေရိကန် APPLICATION သို့ - ESTAmerica အမေရိကန် ESTA အီး-file ခရီးသွားန်ဆောင်မှုများ
ESTA APPLICATION သို့
နေစစ်ဆေးခြင်း ESTA STATUS
VWP COUNTRIES မှ
NEW APPLICATION သို့ နေစစ်ဆေးခြင်းတည်ဆဲ APPLICATION သို့
တစ်ဦးကသစ် ESTA ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်, E-ဖြည့်စွက်
အဆိုပါဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်အောက်တွင် United States ကိုခရီးသွားလာရန်ဆန္ဒရှိသူကိုအရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်ငံတကာခရီးသွားများခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ခရီးသွား 90 ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအဘို့ဖြစ်၏။
သက်တမ်းရှိခရက်ဒစ်ကဒ် (MasterCard, Visa, American Express နှင့် Discover လျှောက်လွှာကြေးနှုန်းဟာ $ 89 ဆပ်ဖို့။
သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို။ (အမည်, ဖုန်းနံပါတ်, mail လိပ်စာနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ)
ESTA application ကိုရှင်းပြခဲ့
အဆိုပါ ESTA လျှောက်ထားရန်ငါသည်အဘယ်သို့လိုအပ်သလဲ?
သင်တစ်ဦးလျှောက်လွှာတင်သွင်းရန်သင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များနှင့်ငွေပေးချေကတ်ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ခရီးသွားခရီးစဉ်တင်ပြရန်ရွေးချယ်နိုင်ပေမယ့်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့အကြောင်းကိုအသုံးအများဆုံးမေးခွန်းများနှင့်အဖြေတွေကိုဘို့ငါတို့မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများပြန်လည်သုံးသပ် ကျေးဇူးပြု. ESTA status ကို
အဆိုပါ ESTA လျှောက်လွှာအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ငွေချေမှု. ,
အဆိုပါ ESTA application များအတွက်အားလုံးငွေပေးချေတဲ့အကြွေးသို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့်အတူသဘောပေါက်ခံရဖို့ရှိသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အစိုးရ ESTA application များအတွက်စစ်ဆေးမှုများသို့မဟုတ်ပိုက်ဆံအမိန့် မှလွဲ. မကို၎င်း, "နဲ့ကူညီပေးဖို့ ESTAmerica.org တူသောအထူးပြုကုမ္ပဏီများအဖို့ကအရွက်ခရီးသွားခွင့်ပြုချက်အဘို့အအီလက်ထရောနစ်စနစ်"ဖြစ်စဉ်ကို။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အဓိကကဒ်အမှတ်တံဆိပ်လက်ခံပါ။ သငျသညျခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်ငွေပေးချေစေခြင်းငှါမတတ်နိုင်လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပေမယ့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့်အတူရှိပါ။
သင့်ရဲ့ ESTA application ကို Verify
update လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အတည်ပြုရန်, သို့မဟုတ်သင့် ESTA သက်တမ်းတိုးဖို့?
သင်တစ်ဦးအတည်ပြုခရီးသွားခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီးနောက်တစ် ESTA အတွက် updated နိုင်အချို့သောလယ်ကွင်းသာရှိပါသည်။ သငျသညျပြင်းပြင်းထန်ထန်သင့်လျှောက်လွှာနှင့်အတူမှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိသေး၏အမှု၌ကိုယ့်ကိုယ်အချိန်ပေးဖို့ကောင်းစွာရှေ့ဆက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖို့သင့်ခရီးစဉ်သည်သင်၏ ESTA ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တင်ပြမှုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါက, e-mail ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကို။
တစ်ဗီဇာနှင့် ESTA နဲ့အတူတူပါပဲလား?
အဆိုပါ ESTA ခွင့်ပြုချက်ဗီဇာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာခရီးသွားများအတွက်အချိန်ကို-စားသုံးဗီဇာဖြစ်စဉ်ကိုကျော်လွှားရန်ခွင့်ပြုဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရသော VWP, အောက်မှာသွားလာရန် Pre-ရှင်းလင်းရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ESTA ခွင့်ပြုချက် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်တစ်ဦးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဗီဇာညီမျှမရှိ, ခရီးသွားများအတွက်ဗီဇာလိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိအခြေအနေများအတွက်ဗီဇာများအတွက်အစားထိုးမရပါ။ သငျသညျပြီးသားခိုင်လုံသောဗီဇာအပိုင်လျှင်သင်တစ်ဦး ESTA မလိုအပ်ပါဘူး။
ESTA နှင့် VWP သတင်းအချက်အလက်
ESTA applications များသာအွန်လိုင်းအမှုကိုပြုနေကြသည်။
အရေးပါသောအပလီကေးရှင်းအသေးစိတ်ကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များနှင့်ငွေပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ သင့်ရဲ့ခရီးသွားခရီးစဉ်တစ်ခု option တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အနောက်ပိုင်းမှာ updated နိုင်ပါသည်။ အားလုံးမဖြစ်မနေနယ်ပယ်များတွင်ဖြည့်နှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြီးစီးရမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အဆိုပါ ESTA application များအတွက်စစ်ဆေးမှုများသို့မဟုတ်ပိုက်ဆံအမိန့်ယူမထားဘူး။ ဒါဟာတိကျစွာပုံစံဖြည့်စွက်ကူညီနှင့်သင့်သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကနေနိုင်ငံသားတွေကူညီပေးဖို့ ESTAmerica.org ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီတွေကမှထွက်ခွာသွားသည်။
အဘယ်သူသည် ESTA ဘို့ Apply ဖို့လိုအပ်တာလဲ?
အဆိုပါဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်အောက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝင်မည်သူမဆို။ မိမိတို့နိုင်ငံများကစွန့်ခွာမတိုင်မီဒီအအမိမြေလုံခြုံရေးဌာန pre-အတည်ပြုဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ခရီးသွားများမှခွင့်ပြုပါတယ်။ သာကို select နိုင်ငံပေါင်းဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်နိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်သငျတို့သအဆိုပါ (VWC) စာမျက်နှာအောက်မှာစာရင်းတှေ့လိမျ့မညျ။
နယူး ESTA လျှောက်လွှာ
ဒါဟာလျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ရန် 10 မိနစ်ထက်လျော့နည်းကြာ
72 နာရီအချိန်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း processing
Update ကို ESTA လျှောက်လွှာ
သင့်ရဲ့ ESTA လျှောက်လွှာများတွင်အသုံးပြုအီးမေးလ်လိပ်စာကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
သင့်ရဲ့ ESTA သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲပြန်လည်သုံးသပ်ရန်
ကောင်းစွာရှေ့ဆက်နယ်လှည့်သင့်ရဲ့ ESTA application ကိုအသေးစိတျကိုစိစစ်ရန်
24 /7ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု။ တိုက်ရိုက်ခရီးသွားပံ့ပိုးမှုအထူးကုယနေ့တွင်နှင့်အတူ chat ။
သင့်ရဲ့ခရီးသွားလျှောက်လွှာ Approved မပါလျှင်, ကျနော်တို့က 100% ငွေ Back ကိုအာမခံငှေပါ။
အဘယ်သူသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းခရီးသွားနိုင်ရန် Authorized ပါသလား
ချစ်ရသူသူမြားကိုသှားရောကျလညျပတျ, ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အားလပ်ရက်ဖို့လာမယ့်? သင့်အနေဖြင့်တိုင်းပြည်ဝင်ရောက်မီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့်သင့်လျော်သောခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်သည်။ အချို့ကိစ္စ, ဒီဗီဇာလျှောက်ထားဆိုလိုတယ်ဒါပေမယ့်သင်ကဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ် (VWP) တွင်ထည့်သွင်းသောတိုင်းပြည်များ၏နိုင်ငံသားမှန်လျှင်, ခရီးသွားခွင့် (ESTA) အတွက်အီလက်ထရောနစ်စနစ်သုံးပြီးပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမြန် option ကိုဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ VWP 38 နိုင်ငံများ၏နိုင်ငံသားများဗီဇာ passort လေးလည်းမပါဘဲအမိမြေလုံခြုံရေးအမေရိကန်ဦးစီးဌာနမှတဆင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုခရီးသွားလာခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်ပါဝင်နိုင်ငံများအပေါ်တစ်ဦးသည်လက်ရှိတွင်နိုင်ငံသားဖြစ်ကြပြီးခိုင်လုံသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိပါက, သင်သာ ESTA ပုံစံနှင့်အတူလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မှီလျှင်, သင် 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့အမေရိကန်အတွင်းသွားလာရန်ခွင့်ပြုချက်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်အခြားတိုင်းပြည်ရန်သင့်လမ်းအပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတဆင့်ခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင်, သင်ဆဲတစ်ဦး ESTA လျှောက်လွှာလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။
အီလက်ထရောနစ်ဗီဇာလျှောက်လွှာကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ ESTA လျှောက်လွှာ။
အဆိုပါ (VWP) ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်အောက်တွင် ESTA လိုအပ်ချက်များကိုအများကြီးလျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများသည့် Non-Immigrant ဗီဇာအီလက်ထရောနစ်လျှောက်လွှာများထက်ဖြစ်ကြသည်။ ဗီဇာလျှောက်လွှာကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းကိုအပေါငျးတို့သခရီးသွားနှင့်သမိုင်းသတင်းအချက်အလက်ဖြည့်စွက်ဖို့တစျနာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအချိန်အကြောင်းကိုလိုအပ်သည်။ vs. အဆိုပါ ESTA လျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်. 10 မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးသွားရည်ရွယ်ချက်များတစ်ခု ESTA များအတွက်လျှောက်ထားသည့်အခါ
တစ်ဦး ESTA လျှောက်ထားသည့်အခါကဆရာဝန်လာရောက်လည်ပတ်သူ vacationing, ချစ်ရသူကိုမြင်လျှင်အတှကျအသုံးပွုနှင့်အမေရိက၏ United States ကိုအများဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးစဉ်များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအပြည့်အဝဗီဇာလျှောက်လွှာလိုအပ်လုပ်ပေးနေချိန်မှာတချို့ကခရီးသွားရည်ရွယ်ချက်များ, လက်ခံခဲ့သည်နေကြသည်။
လူမှုဖြစ်ရပ်များ, ဂီတပွဲ, ဒါမှမဟုတ်တည်ခင်းဧည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကို meetups
တစ်ပြဇာတ်, ဂီတ, အားကစား, ဒါမှမဟုတ်ပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များမဆိုတခြားအလားတူအမျိုးအစား, (ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် paid မရနိုင်သလား) တွင်ပါဝင်မှု!
တစ်ဦးပညာရေး, တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ညီလာခံ, ဒါမှမဟုတ်စည်းဝေးကြီးဆိုအမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်။ eg ရုပ်ပြကွန်း
က Short-term အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်း (သင့်နေထိုင်နိုင်ရန်ဖွစျပှားကုန်ကျစရိတ်များအတွက်မှတပါး USA တွင်မဆိုရင်းမြစ်အားဖြင့်ပေးဆောင်ရမည်မရပါ)!
ဗီဇာ applications များလျှင်အမေရိက၏ United States ကိုခရီးသွားလာမှုအတွက်လိုအပ်သည်:
Long က -Term ပညာရေးဆိုင်ရာ, ကောလိပ်, ဒါမှမဟုတ်နည်းပညာကောလိပ်
မဆိုနိုင်ငံခြားသတင်းစာဆရာ, စာနယ်ဇင်း, ရုပ်ရှင်, ရေဒီယိုများသို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်မီဒီယာ
သငျသညျအဆိုပါအမေရိကန်နိုင်ငံမှတဆင့်ဖြတ်သန်းသည် ESTA လိုအပ်ပါသလား
non-အမေရိကန်နိုင်ငံသားအတွက်ဖြတ်သန်းလျှင် ချက်ချင်းဆက်မပြတ် t ကိုမှတဆင့် ransit အ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသူ / သူမခိုင်လုံသောအကူးအပြောင်းလိုအပ်နိုင်ပါသည် ကို C-1 ဗီဇာသူ / သူမနှင့်အတူသဘောတူညီချက်ရှိပါတယ်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်နိုင်ငံသားမဟုတ်လျှင် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများအတွက်သွားရောက်ခွင့်ပြု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တစ်ဦးခြင်းမရှိဘဲ ဗီဇာ .
ငါ USA တွင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုဆက်သွယ်ဘို့ဗီဇာလိုအပ်ပါသလား?
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနလိုအပ်ပါတယ် ဗီဇာ စွန့်လွှတ်အစီအစဉ် (VWP) ခရီးသွားများအတွက်မှခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် ခရီးသွားခွင့် (ESTA) အတွက်အီလက်ထရောနစ်စနစ်အနည်းဆုံး 72 နာရီစစ်ဆေး-in ကိုမှကြိုတင် တစ်ဘို့ အမေရိကန်လေယာဉ်သို့မဟုတ် ESTA လိုအပ်ပါသည်အမေရိကန်တစ်ဦးမှတဆင့်ဆက်သွယ်။
ငါက USA အတွက် layover ရှိပါကကျွန်မဗီဇာလိုအပ်ပါသလား?
ချက်ချင်းစဉ်ဆက်မပြတ်အကူးအပြောင်း သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးလမ်းဆုံးဖို့သင့်ခရီးစဉ်တစ်ဦးလည်းပါဝင်သည်ကိုဆိုလို layover အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနှငျ့သငျရှိရပ်တန့်ရန်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကအခြားအခွင့်ထူးရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျပြီးသားအမေရိကန်များအတွက် B-1 သို့မဟုတ် B-2 ဗီဇာရှိသည်, သင်တိုင်းပြည်မှတဆင့်အကူးအပြောင်းဖို့ရှိသည်ဆိုပါက ... သို့သော်, သင်တစ်ဦးကို C ဗီဇာမလိုအပ်ပါဘူး။
ဘယ်နိုင်ငံများအမေရိကန်နိုင်ငံသည် ESTA E-Passport လိုအပ်ပါသလား?
ဧည့်သည်များ 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေဖို့စေခြင်းငှါ အရာကိုလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကနေဒါ, မက္ကဆီကို, ဘာမြူဒါ, သို့မဟုတ်ကာရစ်ဘီယံ၌ရှိသောကျွန်းများအတွက်သုံးစွဲအချိန်ကိုလည်းပါဝင်သည် ရောက်ရှိလာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှတဆင့်ခဲ့လျှင်။ အဆိုပါ ESTA ဝေဟင်သို့မဟုတ်ခရုဇ်သင်္ဘောများကရောက်ရှိလာလျှင်လိုအပ်ပါသည်။ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်များအတွက် ESTA မရှိဘဲသက်ဆိုင် မြေယာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုခရီးသည်တင်တစ်ခုပိတ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်လေထုသို့မဟုတ်ပင်လယ်ကနေတဆင့်ရောက်ရှိလာလျှင်, ဒါပေမယ့် VWP (ဆိုလိုသည်မှာဗီဇာလိုအပ်ပါသည်) မှာအားလုံးလျှောက်ထားမထားဘူး။
2016, ထိုကတည်းက ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်လျှောက်ထားပါဘူး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုယခင်ကရှိခဲ့ရှိရာကိစ္စများတွင် မတ်လ 1, 2011 ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပြီးနောက်အီရန်, အီရတ်, လစ်ဗျား, ဆိုမာလီယာ, ဆူဒန်, ဆီးရီးယား, ဒါမှမဟုတ်ယီမင်ခရီး သို့မဟုတ်အီရန်, အီရတ်, ဆူဒန်သို့မဟုတ်ဆီးရီးယား၏ dual-နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်သောသူတို့အဘို့။ ထိုကဲ့သို့သောသံတမန်များအဖြစ်အချို့သောအမျိုးအစား, စစ်တပ်, သတင်းစာဆရာများ, လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်သားများသို့မဟုတ်တရားဝင်စီးပွားရေးသမားများ၎င်းတို့၏ဗီဇာလိုအပ်ချက်အမိမြေလုံခြုံရေးအတွင်းရေးမှူးအားဖြင့်သက်ညှာနိုင်ပါသည်။
အမည်စာရင်းတင်သွင်း & လမ်းပြမြေပုံနိုင်ငံများ။
အဆိုပါဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်တွင် status ကိုများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရဖို့နိုင်ငံများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် "လမ်းပြမြေပုံ" status ကိုနှင့်ရထိုက်ခွင့်များအကြား၌ရှိကြ၏။ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်ကအသေးစိတ်အကဲဖြတ်စတင် အမိမြေလုံခြုံရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဦးစီးဌာန အဆိုပါအမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ငံ၏အမိမြေလုံခြုံရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအလေ့အကျင့်၏။ အဆိုပါအစီအစဉ်မှအတည်ပြုသို့မဟုတ်ပယ်ချခံနေရဖြစ်စေမတိုင်မီတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဟာအမည်စာရင်းတင်သွင်းစာရင်းတွင်ဆက်လက်တည်ရှိစေခြင်းငှါအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအဘို့အဘယ်သူမျှမထူထောင်အချိန်ဇယားရှိပါသည်။
2005 ကတည်းက, ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာနလာရောက်ပူးပေါင်း (သို့မဟုတ် rejoining) တွင်စိတ်ဝင်စားနေသော "လမ်းပြမြေပုံနိုင်ငံ" အဖြစ်လူသိများနိုင်ငံများနှင့်ဆွေးနွေးသည့် VWP ပို့ချလျက်ရှိသည်။ မူရင်း 19 နိုင်ငံများ, 10 အဆိုပါ VWP ဝန်ခံပြီ။
အဆိုပါဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမည်သည့်အချိန်တွင်ဆုတ်ခွာစေခြင်းငှါ။ ဤသည်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအချို့တိုင်းပြည်နိုင်ငံသားများထိုကဲ့သို့သောခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်သူတို့၏ခွင့်ပြုကာလ overstaying အဖြစ်၎င်းတို့၏ VWP ကန့်သတ်, ခြိုးဖောကျဖို့အရင်ကထက်ပိုပြီးများပါတယ်ကယုံကြည်သည်ဆိုပါကဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် အာဂျင်တီးနား''့VWP အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ယင်းကြောင့်နိုင်ငံတွင်းရှိရာအရပျကိုယူပြီးဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ခွာသွားနှင့် VWP ၏လမ်းဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နိုင်ငံသားများ၏ဥပဒေမဲ့ overstay အပေါ်အလားအလာအကျိုးသက်ရောက်မှုများအလငျး၌ 2002 အတွက်ရပ်စဲခံခဲ့ရသည်။ ဥရုဂွေး'' ့အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်အလားတူအကြောင်းပြချက် 2003 အတွက်ရုတ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးရပ်တည်မှုကိုတိုက်ရိုက်င်း၏အရည်အချင်းပြည့်မီဆုံးဖြတ်ရန်ပါဘူးနေစဉ်, ကကျယ်ပြန့်နိုင်ငံရေးအရတည်ငြိမ်၏နိုင်ငံသားများနှင့်စီးပွားရေးအရဖွံ့ဖြိုးပြီးလူအမျိုးမျိုးတရားမဝင်အလုပ်အကိုင်ရှာတာမက်လုံးပေးရှိသည်နှင့်အမေရိကန်အနေဖြင့်မိမိတို့၏ဗီဇာချိုးဖောက်မဟုတ်ဘူး, သောကောင်စစ်ဝန်အလေးအနက်ထားအန္တရာယ်များသည်ဟုယုံကြည်နေသည် ဗီဇာအတည်ပြုသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်အတွက်စဉ်းစား။ ဣသရလေ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၎င်း၏တင်းကျပ်စိစစ်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်သတင်းများအရအဆိုပါ VWP တွင်ထည့်သွင်းရသေး ဣသရေလလူတို့အားခရီးသွားလာပါလက်စတိုင်းအမေရိကန်တွေ, အရှင်အပြန်အလှန်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဘူး။
အဆိုပါ ဥရောပသမဂ္ဂ ဒါကြောင့်လက်ရှိမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကို၎င်း၏ငါးခုကျန်ရှိသောအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖို့ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်တိုးချဲ့ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဖိအားပေးလျက်ရှိသည်: ဘူလ်ဂေးရီးယား, ခရိုအေးရှား, ဆိုက်ပရပ်စ်, ပိုလန်, နှင့် ရိုမေးနီးယား။ ဤအရာအားလုံးသည် မှလွဲ. "လမ်းပြမြေပုံနိုင်ငံများ" များမှာ ခရိုအေးရှား, အရာသာမကြာသေးမီက 2013 အတွက်အီးယူဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလအတွက် 2014 ပု ဘူဂေးရီးယားအစိုးရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်၎င်း၏နိုင်ငံသားများများအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရုပ်သိမ်းမဟုတ်လျှင်ကြောင့်အရောင်းအဝယ်ပြုရာတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမိတ်ဖက်အတည်ပြုမည်မဟုတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံသားများ ခိုင်လုံသောအပေါ်ခရီးသွားလာ, တစ်ဦးချင်းစီစက်ဖတ်လို့ရအောင်သို့မဟုတ် E-နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တစ်ပြန်လာသို့မဟုတ် မှစ. လက်မှတ်အဘယ်သူနည်းသည်ထက် 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့တည်းခိုကြသည်နှင့်တကွ, များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ် နှင့်နိုင်ပါတယ် ခရီးသွားဗီဇာသာတစ်ဦးနှင့်အတူ -free ခရီးသွားခွင့် (ESTA) အတွက်အီလက်ထရောနစ်စနစ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသားများဥရောပဝင်ဖို့အီးယူဗီဇာလိုအပ်ပါသလား ခိုင်လုံသောအမေရိကန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားများမှသွားလာလို့ရပါတယ် 26 ဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ 90 ရက်ပေါင်းဦးရေအများဆုံးများအတွက် Schengen ဧရိယာတစ် Schengen လျှောက်ထားသို့မဟုတ်ရယူစရာမလိုဘဲ ရေတိုရေရှည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခရီးစဉ်များအတွက်ဗီဇာ။
ချစ်ရသူသူမြားကိုသှားရောကျလညျပတျ, ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အားလပ်ရက်ဖို့လာမယ့်? သင့်အနေဖြင့်တိုင်းပြည်ဝင်ရောက်မီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့်သင့်လျော်သောခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်သည်။ အချို့ကိစ္စ, ဒီဗီဇာများအတွက်ပေမယ့်သင်တှငျပါဝငျသောတိုင်းပြည်များ၏နိုင်ငံသားမှန်လျှင်လျှောက်ထားဆိုလိုတယ် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ် (VWP)ယင်းကို သုံး. ခရီးသွားခွင့် (ESTA) အတွက်အီလက်ထရောနစ်စနစ် လွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမြန် option ကိုဖြစ်နိုင်သည်။
တစ်ခုက ESTA အကွိမျမြားစှာခရီးများထွက်သည်သက်တမ်းရှိလား?
သင့်ရဲ့ ဒီနည်းကို ခွင့်ပြုချက်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် မျိုးစုံခရီးစဉ်များအတွက်တရားဝင် (သင်အတည်ပြုလိုက်ကြသည်ရက်စွဲစတင်) နှစ်နှစ်တစ်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်သင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိ, * ပထမဦးဆုံးလာကိုမဆို။ ဤသည်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တစ်ဦးလက်ခံရရှိအဖြစ်ကိုဆိုလို ဒီနည်းကို ခွင့်ပြုချက်မှ ခရီးသွား, သင်ကာလအတွင်းပြန်လည်လျှောက်ထားရန်မလိုပါ တရားဝင်မှု ကာလ။ အဆိုပါ (VWP) ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်အောက်တွင် ESTA လိုအပ်ချက်များကိုအများကြီးလျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများသည့် Non-Immigrant ဗီဇာအီလက်ထရောနစ်လျှောက်လွှာများထက်ဖြစ်ကြသည်။ ဗီဇာလျှောက်လွှာကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းကိုအပေါငျးတို့သခရီးသွားနှင့်သမိုင်းသတင်းအချက်အလက်ဖြည့်စွက်ဖို့တစျနာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအချိန်အကြောင်းကိုလိုအပ်ပါတယ်နှငျ့သငျအတည်ပြုတဲ့မတိုင်မီလများစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ vs. အဆိုပါ ESTA လျှောက်လွှာ အကြောင်းကို 10 မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုက ESTA ဘယ်လောက်ပါသလား?
$ 89.00 အမေရိကန်ဒေါ်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်။ ကုန်ကျစရိတ်လူတစ်ဦးနှုန်း (£ 14 ခန့်) $9၏မဖြစ်မနေအမေရိကန်အစိုးရအခကြေးငွေများပါဝင်သည်နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏လျှောက်လွှာကိုငြင်းပယ်သည်ဆိုပါကသာ $4ကုန်ကျသည်။ (သောခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးအက်ဥပဒေ, 2009 ကွပ်ထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်)
သင့်ရဲ့ ESTA Denied ရရှိသွားတဲ့လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း
တစ်ခရီးသွား ESTA ခွင့်ပြုချက်ငြင်းပယ်လျှင် နှင့်သူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏အခွအေနအသစ်တစ်ခုလျှောက်လွှာကိုလည်းငြင်းပယ်လိမ့်မည်ပြောင်းလဲသွားကြပြီမဟုတ်။ ESTA များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမဟုတ်သူတစ်ဦးကခရီးသွားသည့်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်အောက်တွင်ခရီးသွားများအတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မီ တစ်ဦးမှာ nonimmigrant ဗီဇာလျှောက်ထားသင့်ပါတယ် အမေရိကန်သံရုံးသို့မဟုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံး.
ဘယ်လို Long ကဒါဟာတစ်ဦးက ESTA Get ရန်ကိုယူပါသလား
An ESTA application ကိုတစ်ဦး (10) တစ်ဆယ်မိနစ်ပုံစံနှင့်အွန်လိုင်းချက်ချင်းလုပ်ငန်းများ၌အကြောင်းပါ။ ပလီကေးရှင်းများအများစုတင်သွင်းခဲ့တဲ့တစ်တစ်မိနစ်အတွင်းအတည်ပြုကြသည်။ သို့သော်လည်း application အပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအထိအားဖြင့်နှောင့်နှေးစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်အမှုပေါင်းရှိပါတယ် 72 နာရီ။ သင်၏လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ Processor ကိုရှိခြင်းသည်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးတင်ပြအများဆုံးခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်အတူပေးဆောင်ရလိမ့်မည်။ ESTAmerica သည်အခြားယူနိုင်ပါသည် အမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမျှသာမသင့်သောငွေပေးချေမှု option ကို။
72 နာရီအတွင်းသင့် Travels Begin
ကျနော်တို့အမြန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးအမေရိကန် E-ဖိုင်မှတ်တမ်း ESTA နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်လွှာကိုပေး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ E-ဖြည့်စွက်မှုစနစ် Guild လိုအပ်သောမေးခွန်းများကိုအားဖြင့်သင်တို့စို့နှင့်ငါတို့အဖွဲ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကပေးပို့ခြင်းမပြုမီသင်၏လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်သည်။ ESTAmerica အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ESTA စည်းမျဉ်းတစ်ခု update ကိုလည်းမရှိသည့်အခါကွင်းဆက်နေ, ကျနော်တို့ကိုသင်နိုင်ငံများနှင့်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်အကြောင်းကိုသိစေရန်အီးမေးလ်များကိုထွက်ပေးပို့ပါ။
Secured နှင့်အသိမှတ်ပြု e-ဖြည့်စွက်ပေးချေမှုစနစ်များ
ESTAmerica အတူတတိယပါတီခရီးသွားအေဂျင်စီဖြစ်ပါသည် 24 /7ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု။
ကျနော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရသို့မဟုတ် Border အကောက်ခွန်အေးဂျင်မရှိကြပေ။
မူပိုင်ခွင့်© 2020 ESTAmerica.org
NEW APPLICATION သို့
နေစစ်ဆေးခြင်း APPLICATION သို့